Ingabe uhlobo umuntu othanda ukuhamba futhi ibhasi izinkambo? Khona-ke lokhu okuthunyelwe Akusikho okwenu! Sicabanga ukuthi indlela engcono kakhulu ukubona amanye amasayithi yaseYurophu yisakhiwo sodumo iwukuba ephuza champagne ku ithala esophahleni nobe cafe. Here are some Best rooftop restaurants and cafes in Europe so you can sight-see in style.
lapho Rome, udinga ukubona zonke izindawo amahle lasendulo - efana kweColosseum noma waseTrevi. Kodwa nawe kufanele ukujabulela umbono omuhle lomuzi. futhi, uma uvakashela ibha ophahleni Atlante Star Ihhotela ube nombono lamazwe amabili. Yingakho sicabanga ukuthi ingenye Kuhle esophahleni zokudla nezindawo zokudla e-Europe!
izitimela Fast kusuka London to Rome take around 14 amahora, covering a distance of approximately 1,434 amakhilomitha. Kunezinhlelo njalo phezu umzila wesitimela phakathi London neRoma. Trains for this journey usually open for booking around 12 izinyanga ngaphambili. Uma ukubhuka akakabi evulekile yezinsuku zakho bese ungasetha isaziso yokubhuka ukuthola i-imeyili ngosuku ukuthi amathikithi eshibhe zikhishwa ukuze nithathe uhambo lwenu kusukela London eRoma ngesitimela. Sebenzisa Londoloza Isitimela ukubhuka okusheshayo futhi kalula!
Ngoba kufike umuntu mumbe outlooks best Paris, amabombo ophahleni we Galeries Lafayette umnyango esitolo. Seven izibuya up, lokhu ithala 1500m inikeza umxhwele ngempela-360 ° buka phezu Paris. I-Opera House ungaphakathi uhla close kanye Eiffel Tower kuyinto okwasemuva yayo. Kodwa hhayi kuphela mayelana ukubukwa, ithala linanezincwadi ibha esophahleni yesimanje sleek ngokuthi The Cube Bar.
Evulekile futhi zemvelo ekubekeni, ithala unikeza abantu abangu kokubili ilanga futhi ezimboziwe ngaphezulu ezindaweni emthunzini. Kusukela ibha esophahleni, ungakwazi oda ubhiya abandayo, Iziphuzo aqabulayo kanye ukudla okululana waseParis labangela ukuqala komkhakha. Lo is impela omunye Kuhle esophahleni zokudla nezindawo zokudla e-Europe, ngakho kube nesikhathi esihle ngiyothatha into esihlalweni!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-rooftop-res...nts-cafes-europe/- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)